स्वास्थ्य Archives – Page3of9– Mukundasen Television
महिलामा भन्दा पुरुषमा कोरोनाको जोखिम बढी
फागुन २६ , एजेन्सी कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा महिला भन्दा पुरुषलाई बढी जोखिम हुने देखिएको छ । चीनमा भएको अध्ययनमा कोरोना संक्रमित महिलाको तुलनामा पुरुषको मृत्यु हुने जोखिम बढी देखिएको हो ।यस्तै उमेर समूहको कुरा गर्दा बालबालिकाको तुलनामा संक्रमित पाको उमेरका व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । चीनको रोग नियन्त्रण केन्द्रले गरेको अध्ययनमा महिला तथा बालबालिकामा कोरोनाको गम्भीर प्रभाव पुरुष तथा पाको उमेरका व्यक्तिमा भन्दा कम देखिएको हो...
कोराना संक्रमणको आशंकामा आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका एक नेपाली फरार
फागुन २२ , काठमाडौँ कोरियाबाट आएर आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका एक नेपाली भागेका छन् । कोराना संक्रमणको आशंकामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका नेपाली भागेका हुन् । इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक विशेषज्ञका अनुसार कोरियाबाट आएर बुधबार उनी भर्ना भएका थिए । ती व्यक्ति अझै सम्पर्कमा नआएको र प्रहरीको सहयोगमा उनको खोजी भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा बुधबार नै कोरिया, यूएई र...
कोरोना भाईसका कारण इटालीमा बुधबार मात्रै थप २८ जनाको मृत्यु
फागुन २२ , रोम कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट इटालीमा बुधबार मात्रै थप २८ जनाको मृत्यु भएको छ । इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या १०७ पुगेको छ। इटालीमा संक्रमितको संख्या ३ हजार ८९ पुगेको छ । बुधबार मात्रै इटालीमा थप ५ सय ८७ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । चीनपछि सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ । भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि अप्रिल ३ सम्मका लागि व्यावसायिक फुटबल खेल र...
के साँचिकै हुन्छन त भूतप्रेत ?
माघ ८ , नवलपुर कुन संस्कारबाट हामी हुर्केका छौं भनी बुझ्ने हो भने बोक्सी, भूतप्रेतबारे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । बाबुबाजे लगायतबाट हामीले धेरै कुरा ग्रहण गरेका हुन्छौं । उहाँहरुबाट हामीले वंशाणु गुण त लिएका हुन्छौ नै, साथसाथै उहाहरुको चिन्तन, विश्वास र सोचाई पनि नजानिदो ढंगले ग्रहण भएको हुन्छ । ती पुराना संस्कारहरु पहिलेभन्दा घटेपनि अस्तित्वमा अझै छन् । बोक्सी, भूत, मसान, लागोभागो लगायतका अन्धविश्वास समाजमा व्याप्त छ । आफूलाई परिआएको...
तनावले पनि बढ्छ पेट
माघ ६ , नवलपुर मोटोपनको कारण धेरै मानिसहरु टेन्सनमा देखिन्छन । कयौँ उपायहरु अपनाउँदा पनि मोटोपन नघट्दा तनाब लिएर बसिरहेका हुन्छन । तर त्यही तनावको कारण पनि मोटेपन बढ्न सकछ भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा होला । पुक्क निस्किएको पेटको समस्याले धेरैलाई पिरोेलेको छ । यसका विविध कारणहरु हुन्छन् । समयमा नखाने, धेरै कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना खाने, व्यायाम नगर्ने जस्ता थुप्रै कारण पेट पुक्क फुलेर आउँछ । तर, यस्ता कारणहरुले पेट फुल्ने...
निन्द्रा लाग्दैन , अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय
पौष २२ , नवलपुर पछिल्लो समय धेरैको मुखबाट मलाई निन्द्रा लाग्नै छाड्यो भन्ने कुरा सुनिन थालेको छ । जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरु निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन । निन्द्रा नलाग्ने धेरै कारण हुन्छन् । उठ्ने र सुत्ने समयको टुंगो नहुने मानिसमा निन्द्रा लाग्दैन । यति मात्रै होइन, मोटोपन, डिप्रेसन, मधुमेहलगायतका समस्या भएका मानिसलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन ।निन्द्रा नलागेर हैरान हुनुहुुन्छ भने यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् –लागुऔषध दुव्र्यसनीमा हुनुहुन्छ भने आजैदेखि त्याग्नुहोस् । यसको सेवनले...
घ्युकुमारी प्रयोग गर्दा हुने फाईदाहरु के के हुन् ?
पौष २० , नवलपुर । घ्युकुमारी प्राय जसो सबैको घरमा सजिलै पाईन्छ । शहर बजारतिर, घरको छतमा, आँगनमा गमलामा रोप्ने गरिन्छ भने कुनै ठाउँमा यसको खेती नै गरिन्छ । घ्युकुमारीलाई आयुर्वेदिक औषधीका रुपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । घ्युकुमारी बिभिन्न रोगहरुका लागि औषधीको रुपमा काम गर्छ । घ्युकुमारी सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यो हरेक मौसममा सजिलै पाइन्छ । घ्युकुमारी सेवन गर्दा...
किन र कसरी हुन्छ हृदयघात ?
पौष १२ , नवलपुर मुटु त्यस्तो अंग हो, जुन अंग मान्छे जन्मे देखि नमरे सम्म अनवरत क्रियाशील रहन्छ । मुटुले फोक्सोमा शुद्ध भई तथा अक्सिजन ग्रहण गरि आएको रगतलाई पम्प गरेर रक्तवाहिनी नली– नशाहरुका मार्फत् शरीरभरि नै पु¥याउने काम गर्छ । वास्तवमा, मुटुमा दुईवटा पम्प हुन्छन् । ती मध्ये एउटा पम्पले अक्सिजन ग्रहण गर्नका लागि फोक्सोमा रगत पठाउने काम गर्छ भने अर्को पम्मले चाहिँ सारा शरीरभरि नै शुद्ध रगत पठाउने...
मान्छेको नशामा हावा पस्यो भने यति खतरनाक हुन्छ
पौष १२ , गैँडाकोट के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नु भएको छ, कुनै पनि पानीको पाइपलाइनमा हावा पस्यो भने के हुन्छ ? बगिरहेको पानीको पाइपमा एउटा निश्चित परिणाममा हावा पस्ने हो भने, त्यस पाइपबाट आउने पानीको प्रवाह केही बेरको लागि रोकिन्छ । अर्थात केही बेरका लागि त्यस हावाले पाइपको पानीलाई ब्लक गरिदिन्छ । पानीको बेगले त्यो हावालाई नहटाएसम्म वा अन्य कुनै कारणले यो हावा त्यस स्थानबाट विस्थापित नहुन्जेसम्म त्यो पानी त्यत्तिकै...
पौष १ , गैँडाकोट गैँडाकोट नगरपालिका भित्र धमाधम स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भई रहेको छ । मंसिर २६ गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य शिविर गैँडाकोट नगरपालिकाको विभिन्न ठाँउमा सञ्चालन भई रहेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले स्वास्थ्य अति नै संवेदनशील विषय भएकाले प्रत्यक वार्ड तहमा पिछाडीएका क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य चेकजाँचको माध्यमबाट स्वास्थ्य जनचेतना जागरण होस् भने उद्धेश्यले निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै मंगलबार गैंडाकोट ८ विजय निम्न माध्यमिक...